Semalt Expert: How To Connect Web Design Uye SEO
6BK8000-1EA00-2XA0 SIEMENS.5;text-align:justify;"> Kutsvaga Injini Kugadzirisa kwave kuri kutarisana nekuchinja kukurupamusoro pemakore mashoma akapfuura. Somuenzaniso, mumazuva akwegura, maitiro matsva eSEO seki keyword stuffing angaita kuti webhusaiti iite nokukurumidzaGoogle. Zvisinei, pamwe nekufambira mberi kwekombiyuta uye kutsvaga maitiro, zvigadziridzo zvitsva zvakayera sezvinotarisirwa kuisa iyomawebhusayithi mune injini dzokutsvaga. Nhasi, webhusaiti yewebhu webhusaiti vakagadzira zvishandiso zviri nani zvinogona kukubatsira kuti ubatanidze zvimwe SEO panekugadzira mawebsite. Chero ipi zvayo yekambani yakagadzirwa nekambani inofanira kusanganisa SEO maitiro muhutano isati yaonekwa seyakatendeka.
Paunenge uchigadzira zvinyorwa zvewebsite, funga kuiswaye SEO maitiro ekutsvakurudza akadai seyakakodzera keyword kutsvakurudza. Tsvaga Engine Optimization ndicho chinhu chakakosha chinoita kuti zvinyorwa zviitanekutengeswa kwako kunoda uye zvinoguma mumigumisiro yekutsvaga kwehupenyu. Vatengesi vakawanda vanogona kushandisa zvakanyatsosarudzwa zviripo asi vachiri kukundikana kuwananzvimbo dzakakodzera nevanotsvaga injini dzakadai seGoogle. Mune zvimwe zviitiko, mabhizimusi akawana mawebsite avo ari kubviswa neGooglenekuda kwekusatevera nzira dzakakodzera dzekutengesa.
Max Bell, Mutengi weKuteresi Achibudirira we Semalt Nhare dzeDhijita dzinobudisa webhutani yekugadzira zvinhu izvo zvinobatsira mukugadzira zvakakodzera interactive webhutiro yehuwandu.
1. Kushandisa HTML5
HTML5 inobvumira web crawlers ne bots kubva kune zvinjini kusvika kunetsvaga uye rondedzera zvinyorwa zvepepaiti. Nzvimbo dzakasikwa kuburikidza ne HTML5 dzinoteerera uye dzine unyanzvi hwakanaka hwevashandi.Aya mawebhusayithi anofanira kunge ane chikwereti chakakwana chokugoverwa pakubatanidzwa kwepakiti yekuvandudza kasi ye server pane dzimwe nguvayemigwagwa. HTML5 websites rinowedzera kushandiswa kwevashandisi kunzvimbo yewebhu nekuda kwekunzwisisa kwavo uye nyore..
Nzvimbo dzekuteerera kwepaIndaneti chigadzirwa chekambani chinosanganisira kusikamapeji ewebhu anowirirana nemichina yakawanda uye mapuratifomu pamwe nekushanda muma browsers akawanda kana maitiro ekushanda. Paunoshandisa akugadzirisa kugadzirwa, haufaniri kushandura SEO URL. Somugumisiro, iwe uchabatsirwa nehuwandu hwe SEO rutsigiro urwo rwaizove rwakanga rusati rwavevakarasika pavanoparadzanisa backlink kubva kudesktop uye mobile version yewebsite.
Mapeji okutumira egwaro rinokosha mune SEO rinofanira kunge rinerelevant content. Ichi chinonyengera chinokosha nekuti vanhu vazhinji vanosimuka site nekunyanya kana zvinyorwa zvisinganzwisisiki, hazviratidzika zvinobatsirakana kune dzakawanda zvikuru zvemuzvikamu zvinoita kuti peji yebhundaneti isanganiswe. Nzira dzakasimba dzehutano dzinofanira kunge dziri munzvimbo yakajekaiyo inogona kuita kuti zvive nyore kune vashandisi kutonga mabasa avo mujiji. Yeuka, mushandisi anofanira kunge ari mugumo wekupedzisira weimwe kubudirirawebsite web design.
4. Keyword Application
Kuti SEO ibudirire, munhu anofanira kushandisa zvishoma zvinyorwa izvoinofanira kuva inodzidzisa. Vamwe veZOO nyanzvi vanogona kutenda kuti kusanganisira zvakawanda zviri mumapeji akawanda kuti zvive nenjere kuwana mamwe mavheji ekutsvaga.Zvisinei, muvhareji munhu angangodaro achinjwa nekusarudzwa kushoma kudarika zvakawanda zvingasarudzwa. Zvakakosha kuisa zvose zviri muzvikamuizvo zvisingaverengeki kana kuti vateereri vangave vachinetseka nyore nyore. Semuenzaniso, Google chimbo chakafanana neHummingbird chakaunza zvimwe kuchinjaiyo inogona kuita dzakawanda zvikamu pane imwe peji zvinotyisa kune SEO yako miitiro.
Dzimwe nzvimbo dzewebhu webhupu dzakakosha zvakakosha pane zvose SEO maitirowork. Kuti mumwe atange nzvimbo yakanaka, mutengi anofanira kuronga kugutsikana. Kutevera zvinyorwa zvataurwa pamusoro apa kuchaita kuti munhu ashandewebusaiti yepamusoro uye pamwe chete neyakanaka yekutsvaga injini kuonekwa iyo inobatsira kumushandi uye nekambani pachayo.